In Motion - King County
Community In Motion Equity & Social Justice Guide Toolkit and resources
Xiriiryada Dhaqsid ah
Tukwila—Aan Dhaqaaqno Galno!
Ku saabsan Dhaqaaq
Mahad celin badan ee degaanleyda, shaqaalaha, iyo ardayda 630 kuwa ka qeyb qaatay Dhaqaaqa Tukwila ee xilligan dayrta! King County Metro wuxuu kuu rajeynayaa in aad u sahmisoxulashooyinka gaadiid ee lagu wareegoee bas, tareen, tareen fudud, gaari isla raacid, baaskiil iyolugeyn.
Tan iyo markii 2004, Gobolka King County Metro wuxuu la shaqeeyay 40 xaafadood si uu deegaanleyda ugu dhiiri geliyo isticmaalka qaabab safari waara lacagna badbaadiya, caawiya deegaanka lehna firfircoooni inta ay joogaan. Barnaamijka Dhaqaaq waxaa loo dhisay isticmaalida aasaasyada suuq geynta bulshada ee ku saleysan bulshada: iyagoo la hadlaaya dhiirigelinta bulshada maxalliga iyagoo siinaaya macluumaad, hellitaanka ballanqaadyo ficil ah, siinaayana dardargelin iyo asbaabo dhiirigelinaya dhaqan safar cusub, oo caafimaad qaab leh.
13kii sanno ee la soo dhaafay, xaafadaha Gobolka King Country waxay lahaayeen:
Hoos u dhigid in ka badan 3.2 Milyan maylis oo socdaalo keli wadis ah.
Waxay keydisay 157,000 galloonis oo gaas ah.
Waxay keydisay in ka badan 1,500 tanyo oo CO2 dhanka jawiga.
Haddii xaafadaada ay dooneyso inay helaan Dhaqaaq…
Iimayl noo soo dir wac barnaamijkeena khadka tooska ah ee 206-477-2005.
Soo degso Xirmada Qalab oo macluumaad waxtar ah oo ku saabsan sidaad u kulmin laheyd barnaamijyadaada kuu gaar ah.
Hagida u Abuurid Ololeynta loo Dhan yahay
Aaladaha Daraasadaha Tusaale u ah Beddelidda
Hagida Daraasada Xogta Tirakoobka
“Waxaan ogaaday qaabka aan loo isticmaalin gaarigeyga gebi ahaanba, iyadoon aan wax ka bedelin waqtigii aan soo kacaayay!”
ka qaybgale North Seattle/Shoreline